Faraskii Oldenburg, kii ugu cuslaa ee daadadkii Jarmalka diiriya | Fardaha Noti
Faraskii Oldenburg, kii ugu cuslaa ee daadadkii Jarmalka
Faraska Oldenburg, sidoo kale loo yaqaan Oldenburg, waa u dhigma dhiig diirran oo ka yimaada waqooyi-galbeed Hoose Saxony, oo hore loo oran jiray Grand Duchy ee Oldenburg.
Dastuurka culus ee taranka Oldenburg, wuxuu ka dhigay isleegyadan inay ahaayeen jooga dagaallo badan. Faras ahaa ku habboon sida faraska gawaarida iyo in muddo ka dib caan ku noqday faras koorsada. Waa sinaansho aad u fara badan oo ka dhex muuqda tartamada fardaha kala duwan, oo aan gadaal ka hadli doono.
Taariikhda faraska Oldenburg ayaa bilaabmaya horraantii qarnigii XNUMXaad. The magac iyo caan ku ah in sicirkaan laga helay Yurub oo dhan, waxaa inta badan sabab u ah Count Anton Günter von Oldenburg. Saciid Count, ka sokow inuu ahaa fardooley caan ah, wuxuu si weyn u difaacay isirkan fardaha Jarmalka.
Oldemburg, xitaa gudaha daadadka kulul, waxay leeyihiin qaab muujin iyo guga leh heshiis weyn oo ganaax ah. Intaas waxaa sii dheer, tayada socodka, taranka ama galloping waa mid aad u wanaagsan.
2.1 Bilowga nooca
2.2 Isbedelka weyn ee tartanka
2.3 Maanta Oldenburg
Iyadoo wiish leh inta u dhexeysa 160 iyo 172 cm sare ee engegay, waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada faraska koorsooyinka ugu weyn Jarmalka.
Leh a madaxa profile toosan kaas oo xoogaa cayriin ah kuna saleysan a qoor dheer oo dhaadheer. Garbihiisa aad ayey u muruqsan yihiin xabbaduna xoogaa wey ballaadhan tahay. Waxay leeyihiin dhabarka adag iyo a qoto dheer lomar. Kuwa ay addimada waa gaaban yihiin iyo hocks si fiican loo habeeyay.
Waxaa ka mid ah Oldenburg ka casrisan, ah addimada dheer iyo muujinta weyn ee madaxyada.
Inkasta oo jaakaddiisu ay aqbali karto midabbo kala duwan, tan ugu caansan ayaa ah in la helo bunni, madow, xabadka iyo lakabyada berry.
Dabeecad ahaan, waa xayawaan docile laakiin si maldahan geesinimo leh. Intaa waxaa dheer, iyagu waa isku mid taas si dhakhso leh ayey u bislaadaan wayna muujinayaan si weyn aamin ah daryeelayaashooda iyo milkiilayaashooda.
Oldenburg-ka casriga ah, waxaa lagu kala saari karaa astaamaha "O" iyo wixii ka sareeya taaj, kaas oo lagu diyaarinayo sinta bidix.
Fardo fara badan oo ku noolaa gobolka Oldenburg ka hor qarnigii toddoba iyo tobnaad waxay ahaayeen kuwo siman oo siman, laakiin way ku xoog badnaayeen inay ka shaqeeyaan ciidda culus ee xeebta Frisia.
Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee muujiyey xiisaha taranka faraska aaggaas gaarka ah, waxay ahayd Tiri Johann XVI, kaasoo ka soo iibsaday Frederiksborgers Danmark, fardo turki ah oo la safeeyey, fardo xoog leh oo reer Neapolitan ah, iyo fardaha Andalusia. Ku-xigeenkiisii, horey loogu magacaabay Count Anton Gunther, wuxuu ku daray dhammaan kuwan oo kale waxay lamid yihiin fardihii aadka loo jeclaa ee waqtigaas. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu u diyaariyey bakhaarro kireystayaasha.
Waqti dheeri ka dib Oldenburg waxay u ekaatay fardaha raaxada ee gawaarida xarrago leh. Intaa waxaa sii dheer, waxay ahaayeen isku mid u fiican shaqada beeraha.
hay saddex daqiiqadood oo muhiim ah waa inaan ku muujino taariikhda noocyadan maadaama ay gacan ka geysteen qaabeynta. Daaran 1820, Dukaankii Oldenburg waa la ansixiyay markii ugu horaysay. Daaran 1861, noocani waxaa lagu soo bandhigay diiwaanka ee Jarmalka. Ugu dambayntiina, 1923, buuggii daraasadda faraska ee Oldenburg iyo buugga daraasadda ee Ostfriesen equine ayaa la mideeyay iyo Ururka loo yaqaan 'Oldenburg Horse Breeders Association' ayaa la sameeyay ee maanta.
Isbedelka weyn ee tartanka
Faraska Oldeburg, sida caadiga ah noocyo badan, uu soo maray isbadalo kala duwan ilaa harada taariikhdeeda. Isbeddeladan ayaa u horseeday inuu noqdo nooc aan maanta ku qanacsan nahay. Sinnaantaasi waxay noqotay loo tixgeliyey mid ka mid ah fardaha ugu habboon tartanka iyo tartamada fardaha, gaar ahaan labis iyo soo jiidasho, dhammaantoodna waxaa ugu wacan hagaajinta muuqda ee astaamaha iyo xirfadaha lagu qeexayo iyaga maanta.
Taariikhdeeda oo dhan, jiilka Oldenburg wuxuu helay noocyo hidde-fara badan oo cajiib ah. Noocyada sida Neapolitans, Andalusians, Berbers, Cleveland Bay, Normans iyo Thoroughbreds, waxay qaabeeyeen Oldenburgs.
Noocyada ayaa lagu dhisay aasaas ka kooban mareegaha beeraha iyo gawaarida ujeedooyinka leh.
Noocani wuxuu lahaa adeegsiyo aad u tiro badan: faras gawaadhi, faras madaafiic, faras beer. Si kastaba ha noqotee markii la yimid makaanigis, intii lagu jiray kontomeeyadii iyo lixdannadii, waxaa lagu badalay shaqooyinkii ay qabanayeen. Baahida loo qabo fardaha gawaarida ayaa si weyn hoos loogu dhigay qarnigii XNUMXaad. Si kastaba ha noqotee, firaaqada iyo raacitaanka madadaalada oo kordhay waxay keeneen in ay soosaarayaasha Oldenburg badalaan jihada caarada. Waxay isku dayeen inay la yimaadaan fardo fuushan oo yeelan doona sumcad la mid ah fardaha gaadhigooda. Isgoysyada ay la socdaan Thoroughbred Ingiriis iyo Norman, ayaa la siiyay sidii taas oo ka dhalanaysa equine koofiyad badan.
Isha laga helay: YouTube
Tikniyoolajiyadda bacriminta ee dabiiciga ah iyo horumarka ayaa loola jeeday in xayawaannadu aysan u baahnayn inay hareereeyaan si ay uga mid noqdaan noocyada. Tani waxay sababtay Oldenburg inay sii wadato isbeddelkeeda.
Iyada oo dhammaan isku dhafnaanta hidde-wadaha, la yaab ma leh in taranka uu noqday midka ugu dhameystiran. Waxay kala yihiin fardo xirmo fiican, sidoo kale ciyaaro gaar ahaan shaqada beeraha, taaj saar liiska fardaha gawaarida, iyo sidoo kale, sidaan horayba u soo sheegnay, waxay ku kala duwan yihiin tartamada orodka iyo fardaha.
Casriga Oldenburg, waxay u xushaan bakhaarro iyo marooyin loogu talagalay sii wadida taranka, iyadoo lagu saleynayo tayada ay u leeyihiin labiska iyo fardaha boodaya. Waxaa intaa dheer, fardo Oldenburg ayaa ka qayb qaatay Dharka Ciyaaraha Olombikada.
Ururka Oldenburg ama Verband Association ayaa ogolaaday in kabadan 220 fardo iyo 7000 mareexaan, marka lagu daro kuwa qaybta gaarka ah ka ah barnaamijka taranka. Tani waxay ka dhigaysaa buugga Oldenburg mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Jarmalka.
Oldenburg Verband wuxuu leeyahay hal ku dhig "Tayada ayaa ah halbeega kaliya ee lagu xisaabtamo". Tani waxay mar hore nagala hadlaysaa raadinta heer sare ee jinsiga. Tani waxay sidoo kale caddaynaysaa isku-dhafka hidda-wadaha weyn ee ay u egyihiin kuwaani.
Ku rid ahmiyad gaar ah la siinayo mareegaha, qaar ka mid ah kuwaas oo dib ugu laaban doona awoowayaashii Alt-Oldenburg.
Intaas waxaa sii dheer, deyr kasta, ururku wuxuu ku xusaa "Maalmaha Stallion" magaalada Vechta, halkaas oo lagu qiimeeyo da 'yarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Faraskii Oldenburg, kii ugu cuslaa ee daadadkii Jarmalka
Fardaha lagu ciyaaro, waxaan ka hadleynaa moodooyinka ugu qiimaha badan
Fardo jilicsan iyo noocyada ugu matalaya